Kolontsaina - Bezzia | Bezzia
El tontolon'ny kolontsaina Izy io dia lafiny iray izay tianay hasongadina ao amin'ny gazetinay, satria izahay dia liana amin'ny hetsika mety hampanan-karena ny vehivavy. Noho izany, horesahinay ny zava-drehetra mifandraika amin'ny sinema, mozika, boky sy gazety na sehatra kanto hafa.
Hihaino tsara ihany koa izahay amin'ny famoahana sarimihetsika, boky na rakikira vaovao, hanaraka akaiky ireo mpanoratra fantatra momba ireo olana ireo izahay ary hilaza aminao ny lohateny heverinay fa mahaliana ny mihinana azy.
Ho fanampin'izay, hifantoka amin'ny hetsika ara-kolotsaina Hanjifa amin'ny maha-ankohonana, satria tsy misy tsara kokoa noho ny drafitra iray amin'ireo toetra ireo mba hankafizantsika koa ny vady aman-janantsika Ny lafiny amam-pitiavana na ny vokatra miaraka amin'ny vehivavy vehivavy ho protagonist dia hanana toerana manokana ihany koa.
Ny kolontsaina noho izany dia lafiny iray manan-danja amin'ireo andalana ireo ary tianay ny hanana toerana sy fiantsoana manokana ny kanto sy ny olombelona. Hery ny fahalalana.
Toy izao no anehoana ny andiany faha-69 amin'ny Festival San Sebastian
ny Maria vazquez hace Andro 2 .
Rahampitso hisokatra ny andiany faha-69 amin'ny Festival San Sebastián. Hatramin'ny 25 septambra, iray ...
Ny fararano dia vanim-potoana manasa anao hamaky. Taorian'ny fiainana ara-tsosialy fahavaratra sy ny fahalainana ...
Albums 6 azonao henoina sy vidinao amin'ny volana septambra
Toy ny isam-bolana dia natokanay ny herinandro voalohany hahitana ireo rakitsoratra izay tsy vitanay fotsiny ny mihaino fa mividy an'ity koa ...
Premieres amin'ny sarimihetsika amin'ny volana septambra ho avy izao
Ny volana septambra dia volana iray iarahantsika miverina amin'ny fahazarana. Fiverenana izay misy fahazarana mamerina izay ...
Ny vaovaon'ny mozika tamin'ny volana aogositra
Tamin'ny herinandro lasa izahay tsy nitondra anao ny vaovao mozika miavaka toy ny mahazatra nandritra ny herinandro voalohan'ny volana….
Vaovao 5 momba ny literatiora izay antenainay hahazoanao tanana
Tsy miala sasatra ny mpanonta ary na dia amin'ny fahavaratra aza dia manome antsika nify lava izy ireo miaraka amin'ny vaovao literatiora tonga ...
Toy ny isam-bolana dia manohy mitondra ny sasany amin'ireo sarimihetsika premieres azonao ankafizinao amin'ny teatra ato ho ato….
Fetibe 4 hankafizana mozika mivantana
Na dia naato aza ny ankamaroan'ny festival tamin'ny taona faharoa nisesy, ny mozika indray no ho mpandray anjara ...
Famoahana teatra ho avy
Toa miverina tsikelikely ny fahaverezana mahazatra antsika. Fomba fanao izay tsapa eo amin'ny sehatry ny kolontsaina, iray ...
Ny tantaram-piainana, ny tantaram-piainana ary ny fahatsiarovan-tena dia mitondra antsika amin'ny sary tsy lavorary tsy lavorary, fahalemena sy fampijaliana olombelona, ​​fomba amam-panao ary ...
Sarimihetsika 6 azonao jerena amin'ny sinema amin'ny Aprily
ny Maria vazquez hace 6 volana .
Ao amin'ny tontolon'ny premieres, ny tsy fahazoana antoka dia mitohy ankehitriny, toy izany koa amin'ny lafiny hafa amin'ny ...